Clinique Médico-Chirurgicale de Tanjombato - Ny fitiliana ny homa miadan'ny nono
Ny fitiliana ny homa miadan'ny nono
Anisan'ny ilaina amin'ny fitiliana ny homamiadan'ny nono ny mammographie, izay fitarafana ny nono atao amin'ny alalan'ny milina natokana manokana ho amin'izany.
Mety mahatsapa fivontosana eo amin'ny faritry ny nono ny dokoteranao na koa ianao mihintsy aza. Mety koa mahatsapa fanaintainana fotsiny ihany ianao. Matetika anefa dia tsy areti-mandoza no manjo anao. Kanefa kosa raha sanatria homamiadan'ny nono dia io no anisan'ny fitaovana mahomby indrindra ahafahana mamantatra izany haingana ahazoana mitsabo tsisy hatak'andro.
Ny Profesora RAKOTOARISOA Richard no misahana ny fitiliana sy ny fitsaboana ny homamiadan'ny nono ao amin'ny Clinique Tanjombato. Izy dia mpikambana ao amin'ny Société Française d'Imagerie du sein, ary mitantana ny sampana fitarafana ny nono ao amin'ny Clinique, izay vao nahazo fitaova-pitiliana vaovao" marque GE Sénographe 700T "